Sida Boostada Keliya ay u Keentay 2 Milyan Reais in ay ka kooban tahay wax ka yar 3 Sano | BehMaster
Bogga ugu weyn/Content Suuq/Sida Boostada Hal-Bloog ah ay ugu keentay 2 Milyan Reais nuxurka nuxurka wax ka yar 3 sano
Sida Boostada Hal-Bloog ah ay ugu keentay 2 Milyan Reais nuxurka nuxurka wax ka yar 3 sano
Bishii Juun 2016, Diego Gomes, Maamulaha Guud ee Content Rock, ayaa qoray maqaal ku saabsan sida hal boostada blog ay naga caawisay in aan soo saarno R$436,000 (Brazil Reais) heshiisyo cusub muddo 16 bilood ah.
Hadafka maqaalku wuxuu ahaa in la tuso in istaraatijiyad suuqgeyneed nuxurku ay ku lug leedahay wax aad uga badan in la haysto blog iyo dhajinta si joogto ah. Waxay keeni kartaa natiijooyin dhab ah, abuurista faa'iidooyinka muddada dhexe iyo muddada dheer.
Hal sano ka dib markii la soo tebiyay taas, Boostada Tilmaamaha Suuqgeynta Dijital ah ee caanka ah waxay bixisay ku dhawaad ​​nus milyan Reais xagga dakhliga Rock.
Hadda waxaan ku soo laabannay halkan cusboonaysii tiradan. Maqaalkan, waxaan ku tusi doonaa taas Istaraatiijiyad suuqgeyneed oo si wanaagsan loo sameeyay waligeed ma joogsato soo saarista natiijooyin!
Awood dhufashada ee Content Evergreen
Bishii Disembar 2014, kooxda suuq-geynta nuxurka Rock waxay aqoonsadeen fursad dahabi ah: si ay u qoraan maqaal diiradda saaraya ereyga muhiimka ah "Suuqgeynta Dijital ah", ee loogu talagalay blog-keena Boortaqiiska.
Ka sokow ahaansho ereyga muhiimka ah ee leh mugga raadinta ugu sarreeya ee qaybta suuq-geynta oo leh qiime sare riix kasta, "Suuqgeynta Dijital ah" sidoo kale waxay ka dhigan tahay mid ka mid ah raadinta ugu horreeya ee uu sameeyo mid ka mid ah iibsadahayada aasaasiga ah.
Sidaa darteed, maqaalka noocan oo kale ah ayaa macno badan u sameeyay istaraatiijiyada blog-keena!
Waxaan la soconaa in boostada blog kasta oo la daabacay ay tahay fursad lagu abuurayo ganacsiyo badan. Oo markii aan daabacnay maqaalka ku saabsan Suuqgeynta Dijital ah, waxaan hubinay inay mar walba u keeni doonto macaamiil cusub Content Rock inta ay ku jirtay boggayaga.
Waxayna ahayd dhab ahaan wixii dhacay.
Taasi waa quruxda walxaha waligood dhagaha ah. Si ka duwan sida maqaalka wararka, tusaale ahaan, waxa ku jira weligood cagaarka ah waxa ay la tacaalayaan mawduuc aan lumin doonin muhiimaddeeda wakhti dhaw. Oo sidaas daraaddeed, kaliya adoo ku dhejinaya hal mar bloggaaga, waxay keeni kartaa natiijooyin sanado badan oo badan.
Laba sano iyo badh ka dib markii lagu daabacay boggayaga, boostada "Waa maxay Suuqgeynta Dijital ah" waxay horey u keentay 1.8 milyan reais ganacsi cusub.
Qaybta hore ee sheekadani waxay ka hadlaysay dadaalka qoraalka iyo cusboonaysiinta maqaalka. Hadda, waxaan kuu sheegi doonaa xisaabta waxa soo socda.
Mid ka mid ah dhinacyada ugu xiisaha badan ee Suuqgeynta Mawduuca ayaa ah inaad si fudud ula socon karto dhammaan natiijooyinka oo aad xitaa saadaaliso intooda badan.
Markaa, annaga, la yaab nagumay ahayn in qodobkani uu soo xareeyay dakhli ku dhow R$2 milyan. Waxaan ognahay in boostada blog kasta ay tahay fursad cusub oo lagu kasbado wax badan.
Caqligu maaha mid adag: mar kasta oo si wanaagsan loo meeleeyo maqaalkaagu waa kelmad gaar ah, way sii badanaysaa waa fursadaha aad soo jiidan doonto booqdayaasha maqaalkaas oo aad u beddesho akhristayaasha macaamiisha.
Oo marka ereyga muhiimka ahi uu leeyahay mugga raadinta sare, way ka sii fiican tahay!
Sida laga soo xigtay cilmi-baadhisyada, celcelis ahaan, 30% dadka raadiya ereyga muhiimka ah waxay ku dhamaanayaan gujinta natiijada ugu horreysa.
Ereyga muhiimka ah "Suuq-geynta Dijital ah" wuxuu ku jiraa qiyaastii 60 kun oo raadin bil kasta.
Iyadoo loo maleynayo in 30% dadka 60,000 ee raadiya "Suuq-geynta Dijital ah" bil kasta ay riixaan natiijada ugu horreysa, taas oo ah maqaalkeena, waxaan horayba u awoodnaa. dammaanad qaad ugu yaraan 18,000 hits bishii, kaliya boostada Suuqgeynta Dijital ah.
Haddii aan maalgelin ku samaynayno Xayeysiiska Google-ka si aan u helno qaddar la mid ah hits bishiiba, waanu qarash gareyn lahayn in ka badan 53 kun reais maadaama qiimihii gujistiiba erayga muhiimka ah "Suuqgeynta Dijital ah" uu ku dhow yahay R$5.90.
Tani waxay ka dhigan tahay in dadaal kasta oo ku kacaya wax ka yar R$53,000 bishiiba uu mar horeba faa'iido inoogu noqon lahaa. Iyo soo saarista maqaalkan, wanaajinta, u wanaajinta SEO, iyo qaadashada ficilada lagu beddelayo booqdayaasha macaamiisha - in kasta oo hawl adag - hubaal kharash ka yar taas!
Laga soo bilaabo booqdayaasha ilaa macaamiisha: Qaybta 1 - Abuurista hogaanka
Bishii Maajo 2015, maqaalkayagu wuxuu gaadhay booska ugu horreeya ee su'aasha "Suuqgeynta Dijital ah".
Waxaan horeyba u haysanay mug wanaagsan oo hits ah wixii ka dambeeyay, caqabada xigtana waxay ahayd in aan lacag ka samayno booqdayaashaas. Taasi waa, in la ururiyo macluumaadka xiriirka iyo in la maalgeliyo abuurista rasaasta iyo kobcinta rasaasta.
Waxaan ku tiirsanay dhowr habab oo kala duwan si aan u soo booqde boggayaga blog-ka u beddelno hoggaan.
Soo Bandhigida Hore
Istaraatiijiyada jiilka hogaanka ee qoraaladayada blog-ka waxay ku bilaabataa soo-bandhigid. Marka qof uu booqdo blog-ka markii ugu horeysay, waxaa la siiyaa mid ka mid ah alaabtayada bilaashka ah ee ugu caansan, "Sirdoonka Taraafikada Dabiiciga ah", iyada oo loo marayo pop-up buuxinaya shaashadda oo dhan.
Markii aan tan samaynay, waxaan awoodnay inaan kobcinno saldhigga iimaylka oo aan aqoonsanno booqdayaasha xiisaynaya inay wax badan ka bartaan iibsiga taraafikada. Ka dib oo dhan, tani waa mid ka mid ah maadooyinka badan ee aan ku dabooleyno blog-keena!
5% booqdayaasha galaan barta Suuqgeynta Dijital ah ee blog-ka waxay u beddelaan dalabka soo booda.
Annaga, lambarkani waa mid nagu qanacsan, laakiin kuma filna! Taasi waa sababta aan ugu tiirsannahay xeeladaha kale ee jiilka hogaanka inta lagu jiro boostada blogka.
Waxay bixisaa Kaaba Akhriska
Maqaalka Suuqgeynta Dijital ah wuu ka fog yahay gaaban. Ku dhawaad ​​​​6,000 oo kelmadood ayaa daboolaya mawduucyo dhowr ah oo ku jira caalamkan baaxadda weyn, laga bilaabo fikradaha aasaasiga ah ilaa talooyinka doorashada wakaalada Suuqgeynta Dijital ah.
Sidaa darteed, waxaa jira dhawr fursadood oo lagu daro CTA-yada qoraalka oo dhan, taasoo horseedaysa agab kale oo si qoto dheer u gala mawduucyada maqaalka. Waxaanan leenahay maktabad ay ka buuxaan agab Suuqgeynta Dijital ah!
Waxaanu qoraalka ku soo darnay, meelaha istiraatiijiga ah, tixraacyada agabka sida:
Qalabka Suuqgeynta Warbaahinta Bulshada;
Ebook: Suuqgeynta Fiidiyowyada;
Encyclopedia of Content Suuqgeynta;
Hagaha Dhamaystiran ee Suuqgeynta Dijital ah!
Wadar ahaan, maqaalku wuxuu leeyahay todobo CTAs oo loogu talagalay soo dejinta agabka Waxyaabaha Rock.
Oo maxay taas macnaheedu tahay?
Booqdaha akhriya maqaalka oo go'aansada inuu soo dejiyo mid ka mid ah agabyada la soo bandhigay wuxuu noqdaa hogaanka Content Rock. Si ay u helaan ebook ama xirmo, waxay u baahan yihiin inay bixiyaan macluumaad qaar, sida magaca iyo iimaylka.
377,570 booqdayaasha ah ee bartay blog-kayaga iyagoo adeegsanaya maqaalka Suuqgeynta Dijital ah, 4,815 waxay soo dejiyeen waxyaabo waxayna noqdeen hogaamiyayaal.
Si kale haddii loo dhigo, waxaan awoodnay inaan u abuurno ku dhawaad ​​5,000 oo fursado ganacsi oo shirkadda ah!
Laga Bilaabo Soo-booqdayaasha Ku Socda Macaamiisha: Qaybta 2 - Kobcinta Hogaaminta
Shirkad kasta, hogaanka cusub ee la helo waxa uu u taagan yahay fursad ganacsi oo cusub.
Ka dib oo dhan, qofkaasi wuxuu raadinayaa macluumaadka ku saabsan aagga khibradda shirkadda wuxuuna tilmaamayaa inay raadinayaan xalinta dhibaatada qaar.
Marka laga hadlayo Mawduuca Rock, qof soo dejisanaya agabkayaga Suuqgeynta Dijital ah ayaa muujinaya inay la halgamayaan qayb ka mid ah nidaamka. Haddii kale, uma baahna inay wakhti ku lumiyaan raadinta agab waxbarasho.
Hoggaan kastaa waa macaamiil suurtagal ah, laakiin dhammaantood maaha kuwo ku habboon inay iibsadaan alaab ama ay la soo xiriiraan koox iibisa, sababtuna tahay macluumaad la'aan ama sababtoo ah waxay ku jiraan bilowga safarka iibsadaha.
Taasina waa sababta aan u maal-gelinno kobcinta dhammaan hoggaanada aan ka dhalinno boostada Suuqgeynta Dijital ah, diritaanka iimaylo soo jeedinaya agabyo dhammaystiran, iyo caddaynta sida adeegyada Content Rock ay uga caawin karaan shirkad inay ku hesho macaamiil badan iyada oo loo marayo Suuqgeynta Dijital ah.
Socodka barbaarinta ee bartilmaameedka ah hogaamiyayaashan waxay ku dhammaataa iimaylka ku martiqaadaya inay la hadlaan lataliyaha Content Rock si ay u fahmaan sida aan u caawin karno.
Qofka codsanaya xidhiidhkan waa, annagu, aragtidayada, hogaanka ugu aqoonta badan waxaa jira: Hogaaminta Qualified Marketing (MQL).
Ka dib oo dhan, waxay mar hore soo mareen marxalado badan oo ku saabsan safarkooda iibsadaha, hadda waa waqtigii la-taliyayaasheenu ay wax ka qaban lahaayeen.
Laga soo bilaabo dhammaan booqdayaashii bartay blog-ka Suuqgeynta Mawduuca iyada oo loo marayo boostada Suuqgeynta Dijital ah, 1,273 waxay ku dhammaatay inay la xiriirto Content Rock.
Maxaa dhacaya xiga?
Laga Bilaabo Soo-booqdayaasha Ku Socda Macmiilka: Qaybta 3 - U Beddelka Hogaanka Macaamiisha
Oo ay ku jiraan hogaaminta iyo MQLs, kooxda iibka ee Content Rock waxay lahaayeen 6,000 rajooyin si ay u qiimeeyaan, u aqoonsadaan fursadaha rajo leh, oo ay la sameeyaan xidhiidh. Taasna waxaa ku jira oo keliya kuwa ka yimi Boostada Suuqgeynta Dijital ah!
Si aan uga shaqayno hogaankan, waxaanu ku leenahay kooxda iibka gudaha oo leh ilaa 50 lataliye, kuwaas oo dhamaantood ku takhasusay Suuqgeynta Gudaha.
Macmiil kasta oo Content Rock ah waxa uu maraa habka iibka la talinta ka hor inta aanu helin adeegyadeena. Sidaa darteed, mid ka mid ah waxyaabahayagu ma soo saaro dakhli "kali".
Waxaan ku tiirsannahay koox wanaagsan oo la-taliyeyaal ah si ay u fuliyaan habka iibka oo dhan!
Dhammaan la taliyayaasha kooxdayada iibka waxaa loo tababaray inay u qalmaan hoggaanka ay ka helaan suuq-geyntooda, iyadoo lagu salaynayo macluumaadka hogaanka la bixiyay marka la soo dejinayo agabkayaga (sida magaca shirkadda, tirada shaqaalaha, website-ka shirkadda, iyo magaca shaqada ee hoggaanka).
Markaa, kaliya hogaamiyaasha awooda ugu badan si ay u noqdaan macaamiisha Content Rock waxay u baahan yihiin in lala xidhiidho - wanaajinta wakhtiga iyo kordhinta wax soo saarka hawlaha iibka.
Laga soo bilaabo hogaamiyayaasha ka yimid boostada Suuqgeynta Dijital ah, 85 waxay noqdeen macaamiisha Content Rock.
Anagoo tixgalinayna celceliska dakhliga bishii ee R$1,770, waxaan awoodnay inaan soo saarno R$1,805,400 oo dakhli sanadeed ah. Hal baloog oo kaliya ayaa leh!
Tani waa sheekada nolosha 31-bilood ee maqaal fure u ahaa istaraatiijiyada suuqgeyneed ee Content Rock - oo sii ahaanaysa!
Qoritaanka boostada balooggu waxay noqon kartaa mid fudud - ka dib oo dhan, waa ereyo ku yaal bogga blog.
Laakiin qalad ha sameyn.
Sida aad arki karto, soo saarista iyo dhajinta maqaalku waa uun cirifka barafka. Helitaanka baloogga si uu u soo saaro dakhli dhab ah wuxuu u baahan yahay hawl-qabad ballaaran oo faafinta nuxurka, cusboonaysiinta, hagaajinta dhinacyada farsamada ee SEO, dhisidda jiilka hoggaaminta iyo istaraatijiyad kobcinta, iyo in la haysto koox la-taliyeyaal gaar ah si ay wax uga qabtaan hoggaanka la abuuray.
Taasina waa hal baloog oo keliya. Hadda ku dhufo 10, 100, 1,000.
Haddii aad u maleyneyso inaadan waligaa awoodi doonin inaad ku sameyso shaqo isku mid ah bloggaaga, ha lumin rajo!
Taa baddalkeeda, ku bilow tillaabooyin yaryar, adigoo horumarinaya halkan iyo halkaas, oo ay ku jiraan CTA, adoo diiradda saaraya dadaalkaaga marka hore maqaallada keena gaadiidka ugu badan ee bloggaaga, iyo wixii la mid ah.
Suuqgeynta nuxurku waa istaraatijiyad la horumariyo wax yar.
Mana soo afjari karno maqaalkan anagoo aan nidhaahno waad nagu tirin kartaan! La hadal lataliyaha Tusmada Dhagaxa si aad u ogaato sida aan u wada shaqayn karno si aan uga caawino ganacsigaaga in uu ku kobco suuqgeynta nuxurka, sida aan ku samayno istiraatiijiyaddeena!
Sidee Waaxda Suuqgeynta U Dhisantahay Da'da Isbeddelka Dijital ah
8 siyaabood oo aad ku wanaajiso iimaylkaaga si aad u gasho (& sababta aad ugu baahan tahay)